Nepali Christian Bible Study Resources - १-पत्रुस कि चट्टान?
» अध्ययन मालाहरू » मण्डली इतिहासबाट केही पाठहरू » १-पत्रुस कि चट्टान
यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)
« मण्डली इतिहासबाट केही पाठहरू
२-सीजर कि ख्रीष्ट? »
WordofTruth Publishing © 2007-2019 सर्वाधिकार सुरक्षित